Bonkers Closets ကတင်ပြလိုက်တဲ့ Jamie Chua ရဲ့ Closet တွေအကြောင်း – FemaleWear.net
Bonkers Closets ကနေတင်လိုက်တဲ့ video တစ်ခုကြောင့် အမျိုးသမီးအများစု အံ့အားသင့်လောက်တဲ့ထိ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အံ့အားသင့်လောက်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းကတော့ Jamie Chua ဆိုတဲ့ Singaporean အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Chua ပိုင်ဆိုင်သော အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်နဲ့ အိတ်တွေကို ရိုက်ပြလိုက်တဲ့ video series တစ်ခုကြောင့် လူအများစိတ်ဝင်စားမှုကို များစွာရရှိခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတင် video ရဲ့ view ပေါင်း 30.3M တောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီ video series ဟာ Bonkers Closets ရဲ့ ပထမဦးဆုံး new episode တစ်ခုဖြစ်ပြီး Jamie Chua ရဲ့ closet တွေနဲ့ပွဲဉီးထွက်ခဲ့တဲ့ page တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Bonkers Closets တင်လိုက်တဲ့ video ထဲမှာတော့ အမျိုးသမီးအများစုရဲ့ dream တစ်ခုလို့ဆိုလို့ရတဲ့ Chua ရဲ့ အဝတ်စားတွေ ဖိနပ်တွေနဲ့ အိတ်တွေထားတဲ့ အခန်းထဲကို ရိုက်ကူးပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ကို အမျိုးသမီးထုကြီးကို ကိုင်လှုပ်သွားတဲ့ video တစ်ခုပါ။ Chua ရဲ့ Closet အခန်းကြီးကို ဝင်ဝင်ချင်းမှာတော့ 65 square meters ကြီးမားတဲ့အခန်းကို fingerprint နဲ့ control လုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါမှာဖြစ်တယ်။ အတွင်းမှာတော့ ဗီရိုတွေနဲ့အပြည့်ရှိတဲ့ dress တွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး Hermès အိတ် ၂၀၀ ကျော်ကို အဆင်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hermès အိတ်တွေရဲ့ ခန့်မှန်းငွေ US$8,000 to US$300,000 ကြားမှာရှိပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ နောက်ထပ်တွေ့ရအုံးမယ့် ပစ္စည်းတွေကတော့ jewellery တွေနဲ့ ဖိနပ်အရံပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မျိုးကို ခန့်မှန်းငွေ US$1,500 လောက်ရှိပါတယ်။ Chua ကတော့ သူမရဲ့ များပြားလွန်းလှတဲ့ jacket တွေ dress တွေနဲ့ blouse တွေကြောင့် ယခုရှိတဲ့ closet space နဲ့မလုံလောက်လို့ closet space အများကြီးလိုသေးတယ်လို့လည်း ပြောပါသေးတယ်။
Chanel tweed jacket(US$3,850)
Gucci silk bomber jacket(US$4,980)
Rami Kadi custom gown(US$27,000)
Ashi Studio runway dress(US$6,000)
Create your own fairytale and live in it. #theluminousonegoestoabudhabi
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Dec 1, 2017 at 9:58pm PST
?The lead on to V Day most certainly deserveashot with my favourite backdrop. Yesssss to orange boxes galore!
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Feb 12, 2018 at 7:15pm PST
?My kind of tea party with favourite meringues and lychee rose cake by @mybakesoll.
သူမကတော့ သာမာန်နေ့တွေ့မှာ sneaker စီးရတာကို ကြိုက်တဲ့အတွက် သူမရဲ့ sneaker တွေ အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြထားပါသေးတယ်။
Roger Vivier sneakers (US$1,325)
Louboutin spiked heels (US$3,495)
Sophia Webster wing boots (US$795)
နောက်ဆုံးမှာတော့ သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့ Hermès အိတ်တွေကို ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Hermès doll bag (US$75,000)
Hermès mini pochette (US$11,800)
ဒီအိတ်သေးသေးလေးကိုတော့ သူမက credit card နဲ့ tissue တွေထည့်ဖို့ သုံးပါတယ်တဲ့…
Himalayan crocodile Birkin with white gold detailing and 245 diamonds (US$432,000)
ဒီ Hermès အိတ်လေးကတော့ မီးကျောင်းသားရေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး စိန် ၂၄၅ လုံးပါဝင်ပါတယ်။ Hermès website မှာတောင် မရှိတော့ပါဘူး။
Chua ရဲ့ item တွေအားလုံးကို တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ crocodile Birkin အိတ်အပါအဝင် ခန့်မှန်းချေ စင်ကာပူဒေါ်လာ $850,000 လောက်ရှိနေပါတယ်။ ကဲ..ဒါဆို ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါဘဲ။ နောက်ရက်တွေကျရင်တော့ Chua ရဲ့ မိသားစုနဲ့ သူမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဝင်ငွေတွေအကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားဖို့လည်း ရှိနေပါတယ်လို့ ပြောကြားရင်းနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်နော်။